Obbo Kaasaa Taddasaa guyyaa kalleessaa Ebla 13, 2013 bakka firoonni fi maatiin isaanii argamanitti awwalamaniiru. Oromia Shall be Free |
Obbo Kaasaa Taddasaa guyyaa kalleessaa Ebla 13, 2013 bakka firoonni fi maatiin isaanii argamanitti awwalamaniiru.
bilisummaa April 14, 2013	Comments Off on Obbo Kaasaa Taddasaa guyyaa kalleessaa Ebla 13, 2013 bakka firoonni fi maatiin isaanii argamanitti awwalamaniiru.
Waxabajjii 1955 – Ebla 2013 Obbo Kaasaa Taddasaa abbaa isanii B/Jeneral Taddasaa Birruu fi haadha isanii addee waarqiababaa G/Madiin irraa Waxabajjii 19,1955 magalaa Finfinnee keessaatti dhalatan. Obbo Kaasaan barnoota isanii finfinnee keessaatti barachaa eerga turaniin booda, sadarkaa Lammaffaa mana barnoota”adiventisti Mishiin Aqaqqii Basaqaa”tti Xumuraniiru.
Bara 1972 obbo Kaasaan gargaarsa Jalle, Baroo Tumsatiin Barnoota sadarkaa olaanaa (Schoolarship) akka argaatan ta’ee gara biyya Amerikaatti dhufudhaan bara 1973-1980 Albama State Univeristy(tti) barachudhan barnoota siyaasaa (Political Science)n Degree isa Calqabaa argataniiru.
Obbo Kaasaan nama Laammii fi Oromummaa isaanii jaltaniidha. Obbo Kaasaa Taddasaa dhibamanii mana yalaa seenudhaan yalamaa osoo jiranii Caamssaa 7, 2013 dhalatanii waggaa 58tti adunyaa kana irraa darbaniiru. obbo Kaasaan abbaa ijollee 4 (dubara 2 fi dhiira 2)tti.
Ijollee fi maatii isaani hundaaf rabbi jabiina haakeennuuf !!
Tags Du'e Kaasaa Taaddasaa Taaddasaa birruu
Previous Ethiopia’s Regassa wins Rotterdam Marathon and Haile Gebreselassie wins half marathon in Vienna
Next Qabsoon Bilisummaa Sabaa fi Taphni Siyaasaa Walii Gargari